ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : မြန်မာတိုင်းသိတဲ့ မိုက်ကယ်အဲရစ် (ခင်ငြိမ်းဆွေ)
မြန်မာတိုင်းသိတဲ့ မိုက်ကယ်အဲရစ် (ခင်ငြိမ်းဆွေ)
ဒီနေ့ဒီရက်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းနဲ့ ပေးဆပ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ်ရဲဘော်တစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့ဖူးတယ်.။ အမေ့ရင်ထဲ နေကောင်းပါစ?။ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတက်ရောက်နေတဲ့အမေ... လူထုအတွက်ထမ်းဆောင်နေဆဲ အမေ... အခုချိန်ထိတာဝန်ကျေတုန်း................
***ရဲဘော်ရေ ခင်ဗျားထားခဲ့စဉ်အခါကလိုပဲ (၁၄)နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာလဲ သူမဟာ မပြောင်းမလဲဘဲ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တုန်း...
***ရဲဘော်ရေ ခင်ဗျားကိုမလွမ်းအားတဲ့သူမကို ခုနေအခါများခင်ဗျားတွေ့ခဲ့ရင် အရင်လိုပဲ နားလည်ပေးစွမ်းဦးမှာလား..........
***ခင်ဗျားအတွက် ရှင်စဉ်ကလည်း နှစ်စဉ်မပျက်မကွက် မွေးနေ့ပွဲ မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သူ ... ပြည်သူတွေအတွက်တော့ စစ်ချီပွဲကို မပျက်မကွက်လာခဲ့တယ် ........
***မျက်နှာလေးတောင် မမြင်လိုက်ရဘဲ ခင်ဗျားထားခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူ ... ဘယ့်နှယ်ရှိစ ကိုယ့်လူ သူမရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေ ခုအသီးအပွင့်တွေ ဝေနေပေါ့ .... ရဲဘော် အားရပါစ? ကျေနပ်ပါစ?
မူရင်း Tha Nyar Khin